Oszkár telekocsi 2.1.5 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 2.1.5 လြန္ခဲ့ေသာ2ရက္က
Application မ်ား ခရီးသြားျခင္း & ေဒသဆိုင္ရာ Oszkár telekocsi
Oszkár telekocsi ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
စျေးနှုန်းချိုသာပေမယ့်ပိုမြန်ပိုပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ခြင်းနှင့်အကောင်းတစ်ဦးစိတ်ဓါတ်များအပြင်, သာ. ကြီးမြတ်အဆုံးအမ၌ခရီးသွားလာနိုင်မသာ။ ဘယ်လိုနေသလဲ?
အော်စကာကားကြုံစနစ်, မော်တော်ကားသမားတစ်ချိန်တည်းနှင့်အခြေအနေတွင်သွားလာလိုသူခရီးသည်များမိမိတို့အခမဲ့ရာအရပျပူဇျောနိုငျသညျ။ ခရီးသွားလာစရိတ်များမျှဝေခြင်းအားဖြင့်ခရီးစဉ်အတွင်းတစ်သန့်စင်အသိုင်းအဝိုင်းအတှေ့အကွုံအပြင်, ပယ်နှစ်ဦးစလုံးပိုကောင်းများမှာ!
သငျသညျကားဖြင့်ခရီးသွားလာနှင့်အနည်းဆုံးနေရာလွတ်ရှိလြှငျ, တစ်ဦးအမြန်မှတ်ပုံတင်ပြီးနောက်, သင့်ကြော်ငြာအရှုံးမပေး, ငါတို့သည်ခရီးသည်တင်ကျွန်တော်တို့ကိုမျှော်လင့်။ သငျသညျသွားပြီးနောက်အဖော်အစပိုင်းတွင်ဤကဲ့သို့သော GPS စနစ်အနေအထားအတိုင်း, ကြော်ငြာအရှုံးမပေးဖို့လုံလောက်ပါတယ်တစ်ခုခုကိုသုံးပြီးခရီးသွားလာရှာဖွေရေးခရီးသည်အပေါ်အခြေခံပြီးခဲ့ real-time ရှာတွေ့ပါစေ!
သငျသညျOszkárအတွက်ခရီးသည်အဖြစ်အသုံးပြုချင်လျှင်, မှတ်ပုံတင်ပြီးနောက်သင်အာကာသချန်ထားသောအဘယ်သူသည်သင့်လျော်သောမော်တော်ဆိုင်ကယ်များအတွက်ရှာဖွေနိုင်ပါတယ်။ ခရီးသွားလာခြင်းမပြုမီ, သငျသညျကဟောင်းအပေါင်းအဘော်၏ကိုယ်ရေးအကျဉ်းကိုစာမျက်နှာလေ့လာသင်ယူသူနှင့်အတူပူးတွဲခရီးစဉ်တန်ဖိုးထား, ဒါကြောင့်ကားမောင်းသူရဲ့ရှေးခယျြမှုအတွက်အခွင့်အလမ်းမှကျန်ကြွင်းရကြပါဘူး။
အားလပ်ရက်ပြီးနောက်, ကားများနှင့်ခရီးသည်တင်ယုံကြည်မှုရပ်ရွာအခြေခံအုတ်မြစ်ကူညီပေးနေ, နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အချင်းချင်းအကဲဖြတ်လိမ့်မည်။
Mobilapplikációvalဆက်စပ် comments: android@oszkar.com
Oszkár telekocsi အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Oszkár telekocsi အား အခ်က္ျပပါ
sts86 စတိုး 84 162.51k
Oszkár telekocsi ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Oszkár telekocsi အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 2.1.5
ထုတ်လုပ်သူ Oszkar.com telekocsi Kft
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ https://www.oszkar.com/misc/privacy.php
လက်မှတ် SHA1: D5:84:E6:EA:80:69:3A:EC:A0:FE:F5:D5:AB:56:4D:65:60:F0:E4:42
အဖွဲ့အစည်း (O): Oszkar
Oszkár telekocsi APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ